गलकोटलाई डेढ दशकपछि फर्केर हेर्दा… | हाम्रो गल्कोट
गलकोटलाई डेढ दशकपछि फर्केर हेर्दा...
Dec 28, 2016 article प्रकाश थापा7मिनेट
सहायक वन अधिकृत
जिल्ला वन कार्यालय, बाग्लुङ
समय र परिवेश कत्ति बलवान रहेछ । विगतलाई एक पटक फर्केर हेर्दा म आफैंमा झसङ्ग हुन्छु । थाहै नपाइ अलि अलि गरी समयले बेस्सरी कोल्टो फेर्दो रहेछ । त्यही कोल्टो फेराइमा बागलुङ जिल्लाको पुरानो मुकाम गलकोट जुन आफैमा पहिलेको चौबीसे राज्य मध्येको एउटा राज्य थियो यही गलकोट डेढ दशकमा व्यापक परिवर्तित छ । पुराना तस्विर र अहिलेका तस्विरहरु फेसबुकमा आक्कलझुक्कल देख्दा म आफैमा अचम्मित पर्दछु । विज्ञान, सूचना तथा प्रविधि, सामाजिक संरचना र भौतिक विकास निर्माणको प्रभावले यही डेढ दशकमा गलकोट कायापलट हुने गरी फेरिएछ ।
मनोरम घुम्टे लेक
उहिले जिल्ला सदरमुकामबाट करिब ८ घण्टाको थकित हिडाइमा गलकोट क्षेत्रमा पुगिन्थ्यो । त्यसबेला मेरो मानसपटलले अहिले जस्तो बस वा जिप रोजी रोजी चढौला र ३ घण्टा समयमा यात्रा गरिएला भन्ने सोचेकै थिएन । एडिविको मोटर बाटो र त्यसमाथिको झन मध्य पहाडी लोक मार्गको सुचारुले गलकोटको आज मुहारै फेरिदिएको छ । छिटो छरितो यात्रा र सुगमतामा गलकोट भेगसम्म आइपुगेछ । ढुंगा माटाका कच्ची साधारण घर र साना साना गल्लीहरु उहिलेका कहलिएका गलकोट क्षेत्रमा रहेका बजारहरु हटिया र हरिचौरमा थिए । यही डेढ दशकमा ती बजारहरु आधुनिकताको सुरुवाती दिनहरुमा पुगिसकेछन् । सिमेन्टेड घर, चाक्लो बाटो र बढ्दो सहरीकरणले मनै लोभ्याउने भएछ । होटेलको नाउँमा केही साना झुप्राहरु अहिले ठुला ठुला भएछन् र घरै पिच्छे रेष्टुरेन्ट र होटेल खोलिन थालेछन् । लहलह धान झुल्ने मजुवा फाँटमा प्लटिङ गरी जग्गा व्यापार पो फष्टाएछ । माथि माथिका बस्तीहरु ताराको सिप, अर्गलको भातखाने डाँडा, हिलको काँक्राखोर, मल्मको झिर्का, पाण्डवखानीको रमुवा लगायतका पुराना विकट मानिने स्थानमा समेत धुलौटे भए पनि मोटर बाटो पुगेछ । ओहो ! यो डेढ दशकमा विकासको कति राम्रो परिवर्तन । सूचना संचारको लागि चरौदीको आर्मी क्याम्पमा राखेको ल्यान्ड लाइन फोनबाट गलकोट क्षेत्र भरिका मानिसहरुसँग घण्टौ लाइन लगाएर फोन गर्ने पालो पर्खेको हिजै जस्तो लाग्छ । त्यो परिवेशबाट आज यो गलकोटमा हात हातमा मोवाइल सेट र हटिया बजारमा गलकोट एफ्.एम् संचालन भएको अवस्था छ । गलकोट सेरोफेरोको समाचार बिहान ७ र बेलुका ७ मा सुन्न पाइने भएछ । सुविधाको उपयोग आफ्नै गाउँ ठाउँमा बसी उपभोग गर्न पाउँदा म आफैमा आश्चर्य चकित छु ।
घुम्टे लेकबाट देखिने सुन्दर वन
यति ठूलो विकासको परिवर्तन यस क्षेत्रमा पाउँदा पनि उहिले जस्तो रमाइलो खै किन हो आजकल त्यति लाग्दैन । गलकोट आफैमा सुन्दर छ । हावापानी बस्नका लागि उत्तम, मनोरम प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण तै पनि मनमा केही बिजे जस्तो । सौन्दर्यको लागि गलकोटको घुम्टे, गाजाको धुरी, निलुवा लेक बागलुङ जिल्लामै प्रख्यात ठाउँ हुन् । यी ठाउँमा नझुम्ने वा नरम्ने को होला र । यही डेढ दशकमा गलकोटको मानवीय स्रोतमा ह्रास वा भनौ केही गुमेजस्तो अवस्थाले गर्दा उहिलेको गलकोट जस्तो लाग्दैन । गलकोटका गाउँ बस्तीबाट युवा पलायनको नराम्रो रोग भनौ वा आर्थिक उन्नयनको लागि विदेसिएको भनौ । युवाहरु गाउँघरमा छैनन् । यो क्रम अहिलका वर्षहरुमा दिन दुई गुना भनौ रातको चौगुनाका दरले अगाडि बढिरहेको छ । हुन त देशमा रोजगारी छैन । बढ्दो महंगी छ । स्वदेशमा केही गरौ भन्नेहरुका लागि पनि कुनै वातावरण नै छैन । देशको मूल समस्यामा वैदेसिक पलायन पहिलो सूचीमा आउने गरेको छ । तर अन्य भेग वा जिल्लाको तुलनामा गलकोट क्षेत्र वैदेसिक रोजगारीमा अब्बल स्थानमा आउँछ ।
बाजे कै पालादेखि नै भारतीय सेनाको जागिर गलकोटका लागि कुनै नौलो कुरा होइन । त्यतिबेलाको समयमा भारतीय सैनिक बन्ने लहर हुन्थ्योे । कोही भारतीय सेनामा जागिर गर्ने, त कोही गाउँघरमा खेतीपाती र पशुपालन गर्ने । यी दुई कुराले बाजेको पालामा गुजारा चलेको थियो । आज पनि गाउँबस्तीतिर धेरै नै सेवा निवृत्त सैनिकहरु छन् । आज गलकोटको समाज अलि फेरिएको छ । बाजेका पालामा समेत भारतीय सेनामा पलायन नभएको होइन । तर त्यो सीमित पलायन र केही वर्ष पछिको गाउँमा फर्किने किसिमको थियो । अधिकांसहरु स्वदेशमा नै कुटो कोदाली र पशुपालन गर्दथे । परिवारसँगै बस्दथे, मिठो मसिनो खान्थे र गाउँको माटोमा जीवन जिउन संघर्ष गर्दथे । तर पनि कत्ति ठूलो पारिवारिक मिलाप र सन्तोष थियो ।
पाण्डवखानीको सिद्घथान नजिकै रहेको सुन्दर चौर
अहिलेका वर्षहरुमा पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । अधिकांश गलकोटेहरु सफल जीवन र आर्थिक समृद्घिको मिठो सपना बोकेर जापान, युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र कोही खाडी त कोही भारतमा आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन् । वैदेसिक रोजगारीका लागि विदेश जाने मध्ये धेरै गलकोटेहरु जापानमा छन् । जापान जानेहरुमा कोहीले आफ्नो परिवार उतै सारेका छन् त कोहीे लैजाने सुरमा छन् । जापानमा रहेका गलकोटेहरुको आवाज बुलन्द गराउन र स्वदेशमा केही गरेर देखाउन जापानमा छरिएर रहेका हजारौं गलकोटेहरु एकजुट भई गलकोट समाज जापान नै गठन गरिसकेछन् । गलकोटे आफैमा इमानदार र मिहिनेतीको पर्यायवाची नाउँ हो । यही आफ्नो गुणले गर्दा धेरै नै गलकोटेहरुको जापान लगायत अन्य मुलकुमा समेत आफ्नै व्यावसाय फस्टाएको रहेछ भने कोहीले जापानका रेष्टुरेन्टमा काम गरी जापानी मान कमाएका रहेछन् । यही मान, सान र बाध्यताले गर्दा नै होला विदेसप्रतिको आर्कषण । विदेशमा अधिकांश गलकोटे रहे पनि उनीहरुको मन गलकोट मै रहेको झल्को उनीहरुले गाउँ ठाउँमा बेला बखत गर्ने सामाजिक सेवाका कार्यबाट झल्किने गरेको छ । चाहेर भनौ वा नचाहेर, आवश्यकता भनौ वा विवशता, विविध कारणले गलकोटेहरुको लर्को विदेस पलायनतर्फ तीव्र गतिमा छ ।
पाण्डवखानीको सिद्घथानमा वैशाखे पूर्णिामाको मेला
यही तीव्र गतिको वैदेसिक रोजगारीको वेगले गलकोट क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक प्रभाव पारिरहेको छ । ठुलो मात्रामा भित्रिने विप्रेषणले गलकोटका वस्ती वस्तीमा आर्थिक सबलता छाएको छ । गलकोटका कुना कन्दारामा चर्को मूल्यमा जग्गाको कारोबारले पनि यो सबलता झल्काउँछ । वित्तीय कारोबारका लागि खुलेका सहकारी र बैंकले पनि यसलाई प्रष्ट देखाउँछन् । गलकोटेहरुको खर्च गर्ने शक्ति बढिरहेको छ । यसै कारण गलकोटेहरुको जीवन शैली आधुनिकतातर्फ उन्मुख छ । जीवनस्तरमा सुधार हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो । यो समाजको समृद्घिको सूचक समेत हो ।
डेढ दशकमा गलकोटको सामाजिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । आर्थिक रुपमा सबल देखिए पनि सामाजिक संरचना भने अलि कमजोर वा भताभुङ्गको अवस्थामा पुग्न लागेकोे हो कि भन्ने मनमा चिसो पस्यो । गाउँघरमा वृद्घ वृद्घा, केटाकेटी र केही युवाको मात्र बाहुल्यता हुन थालेको छ । अधिकांश युवाहरु परदेशमा छन् । यसै कारण गलकोटमा सबथोक हुँदा हुँदै पनि केही हराएको त केही छुटे जस्तो भएको छ । गाउँघरमा हुने विकास निर्माण, राजनैतिक दलका प्रशिक्षण, आमा समूह, कृषि समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी उपभोक्ता समूह र सहकारी लगायतका अन्य सामुहिक भेलामा युवा प्रायः शून्य देखिन्छन् । अहिलेका दिनहरुमा प्रत्यक्ष सामाजिक कार्यमा उनै सेवा निवृत्त व्यक्तिहरुको मात्र योगदान भइरहेको छ । अब यही अवस्था रही रहे केही वर्षपछि गलकोटको सामाजिक विकासमा नकरात्मक प्रभाव स्पष्ट रुपमा नै देखिने सम्भावना म देख्दछु । यसैगरी रोजगारीले आर्थिक पाटोमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए पनि पारिवारिक जटिलता जस्तैः– सम्बन्ध विच्छेदका घटना, कुलतमा बालबालिका इत्यादि भने दिनानुदिन बढिरहेको छ । विगतको डेढ दशकलाई केलाउँदा गलकोटे समाज व्यापक रुपमा परिवर्तित देखिन्छ । समाजमा पैसा प्रशस्त मात्रामा छ तर त्यसको सही उपयोग भएको देखिदैन । पैसाले व्यक्तिको दम्भ र घमण्ड एकातर्फ बढाइरहेको छ भने अर्कातर्फ व्यक्तिगत पहिचान नै समाप्त पार्ने खतरा छ । बालबालिकामा पैसाको फजुलखर्च, दुरुपयोग जस्ता नकारात्मक प्रभाव अहिलेका दिनमा देखा परिरहेका छन् । बालबालिकाको मस्तिष्कमा समेत जीवनको उद्देश्य पैसा कमाउने र पैसा विदेसबाट मात्र कमाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम छ । उनीहरुको मनोविज्ञानमा मातृभूमिमा केही गर्छु भन्दा पनि विदेसप्रतिको मोह ज्यादा देखिन्छ । अर्कातर्फ हेर्ने हो भने विदेसको धन गलकोटलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिदैन । पैसा जति काठमाडौं, पोखराका घर र गलकोटका धान झुल्ने फाँटमा घर ठडाउनेतर्फ उन्मुख हुँदै छ । गलकोटेहरुको लगानीमा गलकोटमा कलकारखाना या अन्य आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यको थालनी भने देखिदैंन ।
करिव डेढ दशक अघि गलकोट क्षेत्र अन्तरगतको हटिया गाविसमा लिइएको तस्विर
विगतको डेढ दशकमा गलकोटमा साँस्कृतिक परिवर्तन समेत देखा परेको छ । पहिलेका हाम्रा आफ्ना लोक संस्कृति तथा कला विस्तारै हराउँदै छन् । अहिलेका वर्षहरुमा च्याउ झै वर्षभर भइरहने मेलाहरुले त झन् विकृतिलाई नै प्रोत्साहान गरे झै देखिन्छ । मेलाका नाममा हुने आयातित वस्तुको प्रवद्र्घनले स्थानीयमा बाह्य वस्तुप्रतिको मोह बढाएको छ । यसैगरी टोल टोलमा मेला लाग्ने परम्पराको थालनी र मेलाको लागि गाउँदेखि जापान लागायत अन्य मुलुकसम्मको चन्दा आतंकले पनि विकृतिको थालनीलाई टेवा पु¥याइरहेको देखिन्छ । यानीमाया, सालैजो, नानीलै लगायत अन्य गाउँघरका ठेट लोक भाका कही कतै सुन्न पाइदैंन । वैदेसिक रोजगारीले लोक परम्परालाई समेत नमिठो प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
आधुनिकता तर्फ ढल्कदै गरेको गलकोटको हटिया बजार
यसरी गलकोटलाई डेढ दशक यता फर्केर हेर्दा व्यापक परिवर्तनहरु देख्न सकिन्छ । आर्थिक पाटोमा वैदेसिक रोजगारीले क्षणिक रुपमा सुसम्पन्न बनाए पनि समाजमा कुसंस्कार र कुरीतिहरु भने बढाएको देखिन्छ । अतः गलकोटको सुनौलो भविष्यको लागि गलकोटे धन र मनलाई एउटै साङ्लोमा पारेर गलकोट क्षेत्रका विविध क्षेत्रमा लगानी गरी स्वरोजगारतर्फ समाजलाई उन्मुख गराउनु पर्ने बेला आएको छ । आजका दिनमा जो जे जस्तो बाध्यता र परिस्थितिले जहाँ जानु परे पनि भोलिका दिनहरुमा जहाँको धन भए पनि आफ्नै मातृभूमिमा तन, मन र धनको संयाजनले हाम्रा भावी सन्ततीलाई आफ्नो जन्मभूमि छोडी कोही कसैलाई अन्यत्र कतै भौतारिन नपरोस् । गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगार आफ्नै जन्मभूमिबाट प्राप्त होस् । जय गलकोट । जय जन्मभूमि ।
गलकोट नगरका मेयरलाई विदेशबाट एक युवाको पत्र
आदरणिय गलकोट नगरपालिका मेयर भरत शर्मा ज्यु समुन्द्रपारीबाट नमस्कार .. सामाजिक संजाल फेसबुक बाट नै सल्लाह सुझाब र अालोचनाको अपेक्षा... ...
दुर्गा बहादुर खत्री May 31, 2017 पुरा पढ्नुहोस
उसको तीन पुस्ते चुनाव
यतिबेला देशलाई स्थानीय निकायको चुनाबले पुरै छोपेको छ । चुनावी प्रचारप्रसारमा गाउँ देखी शहरसम्म बिभिन्न दलका झण्डा बोकेर घरदैलो अभियानमा... ...
Puran Shreesh May 8, 2017 पुरा पढ्नुहोस
स्थानिय निर्वाचनमा भोट के का लागी ?
दुर्गा बहादुर खत्री May 8, 2017 पुरा पढ्नुहोस
सहरिया जीवन शैलीबाट अत्तालिएर मनोरम प्रकृतिको खोजी गर्दै जाँदा मंसिरको पहिलो साता शुक्रबारका दिन बागलुङ भकुण्डेको यात्रा गर्ने निधो गरियो... ...
प्रकाश थापा Feb 15, 2017 पुरा पढ्नुहोस
झोलुङ्गे पुलको जिल्ला बाग्लुङ्ग, बाग्लुङ्गको मुटु गल्कोट [Photo Feature]
बागलुङलाई चिनाउने आधारभूत पहिचान भनेकै झोलुङ्गे पुल हो र गल्कोट बाग्लुंगको मुटु हो। गल्कोटका केहि झोलुङ्गे पुलहरुको सुन्दर तस्वीरहरु |... ...
Galkot Jan 4, 2017 पुरा पढ्नुहोस
पर्यटकीय विकासको प्रतीक्षामा गलकोट
विश्वव्यापी रुपमा पर्यटन व्यवसाय धुँवा रहित व्यवसायका रुपमा चिरपरिचित छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरु मध्ये नेपाल पर्यटन ...| Galkot News,... ...
प्रकाश थापा Dec 29, 2016 पुरा पढ्नुहोस
स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा गलकोट
नेपाल अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । राज्य पुनर्संरचनाका सवालमा नेपाल सात प्रदेशमा सीमाङ्कन पनि भइसकेको छ । अहिले नेपालको... ...
डा. दिन बहादुर थापा Dec 23, 2016 पुरा पढ्नुहोस
पाण्डवखानी घुमेर हेर्दा!
काठमाडौंबाट करिब ८ घण्टा माइक्रो चढेपछि बागलुङ सदरमुकाम आइपुगिन्छ । त्यसपछि मध्य पहाडी लोकमार्गहुँदै जीप यात्रा गरी ५ घण्टामा पाण्डवखानी... ...
प्रकाश थापा Dec 20, 2016 पुरा पढ्नुहोस
ड्रोन बाट खिचिएको गल्कोटको भिडियो भाइरल हुदै[भिडिओ]
गलकोट स्पोर्टस कल्ब टोकियोको प्रथम नियमित बैठक सम्पन्न, गलकोटको खेलकुद तथा शैक्षिक बिकासका लागी गलकोट समन्वय समिती निमार्ण
थानेश्वर गौतमको शास्त्रीय गजल 'छ मसंग सबै छ' लोकप्रिय हुदै [भिडियो]
वडा कार्यालयमा पाइने सुविधाहरु | सक्दो सेयर गर्नुहोला
बाग्लुङ्ग जिल्लाका हुलाक कार्यालय र तिनको POB ठेगाना